Nin Mayd ah oo lagu arkay xeebta degmada Xamarweyne | KEYDMEDIA ONLINE
Nin Mayd ah oo lagu arkay xeebta degmada Xamarweyne
Muqdisho (KON) Xeebta Geel laq ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa maanta laga helay meydka nin da’diisa lagu qiyaasay 30-jir oo ay soo caarisay badda iyadoo saraakiisha degmada Xamarweyne ay faah-faahin ka bixiyeen qofkaasi badda ay soo caarisay.
Taliyaha saldhiga degmada Xamarweyne Maxamed Daahir ayaa sheegay in meydka ay badda soo caarisay uu yahay nin da’diisa lagu qiyaasay 30-jir dhirirkiisana uu yahay 1.60.
Maxamed Daahir ayaa sheegay in meydka ruuxaasi loo gudbiyay xarunta dambi Baarista ee dowladda Soomaaliya baaritaanana lagu sameynayo,inkastoo aan la ogeyn qaabka ninkaasi uu udhintay marka laga soo tago in badda ay soo caarisay.
Taliyaha saldhiga degmada Xamarweyne ayaa sidoo kale soo hadal qaaday ammaanka degmada waxaana uu sheegay in dhibaato aysan ka jirin degmadaasi xaaladahana ay yihiin kuwa wanaagsan.
Meydka ruuxaan ay badda soo caarisay ayaa laga helay xeebta Geel Laq ee degmada Xamarweyne,xilliyada qaar xeebaha magaalada Muqdisho ayaa sidan oo kale looga helaa meydka dad ay soo caarisay badda.